दलितको घरमा पस्ने काग्रेसजनले दलितलाई पनि आफ्नो घरमा पसाउलान ? – ebaglung.com
२०७५ बैशाख २०, बिहीबार १४:३८	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
यति वेला गुल्मी कांग्रेसको ५० दिने महाअभियानले निकै चर्चा पाएको छ । विशेष गरी केहि वर्ष अघि सम्म दलित भने पछि टाउँको मर्काउने , नाक खुम्चाउने र दलितलाई छुँदा सुनपानी छर्किने कट्टर व्राम्ण समुदाका कांग्रेस कार्यकताहरु दलितको घरमा वसेर उनिहरु संगै पकाउने खाने, काम गरी दिने भुल्लाभुल्ली जे छ त्यस्तैमा सुत्ने कुराले निकै चर्चा परिचर्चा पाएको छ ।
एकथरी विपक्षीहरु यसलाई नाटक मञ्चन भनेर आलोचना गरी रहेका छन् भने स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुले राम्रो कामको सुरुवात भनेर प्रशंसा पनि गरी रहेका छन् । सात साल अघि देखि नेपालमा जमेको पुरानो पार्टी कांग्रेसले अहिले सम्म के हे-यो ? वल्ला अहिले आएर दलित संग अपनत्वको आवश्यकता कसरी देख्यो ? भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई सुरु मै यस अभियानका मुख्य अभियान्त कांग्रेस सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले जवाफ दिई सकेका छन् ।
तर कांग्रेसले ल्याएको अभियानलाई यो अभियानलाई आलोचना गर्नुको साटो अरु राजनैतिक दलले पनि तिव्रता दिन र छुवाछुत मुक्त जिल्ला बनाउन लाग्न आवश्यक छ । अर्को कुरा दलितका घर भित्र पसेर खाने कांग्रेस व्राम्हणले फेरी त्यो दलितलाई आफ्नो घरमा लगेर त्यसरी नै खुवाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने सवाल पनि उठ्नु स्वभाविकै हुन जान्छ ।
२०७५ बैशाख २०।
जिल्लाको विकासमा आफुले सक्दो प्रयास गर्ने सांसद छन्त्यालको प्रतिवद्धता